Winkoko Htun on Flipboard
47 Flips |7Magazines | @winkokohtun7 | Keep up with Winkoko Htun on Flipboard,aplace to see the stories, photos, and updates that matter to you. Flipboard createsapersonalized magazine full of everything, from world news to life’s great moments. Download Flipboard for free and search for “Winkoko Htun”
အလှမယ်သျှားထွဋ်အိန္ဒြာ ယူဆောင်သွားသည့်<br>လက်ဆောင်ပစ္စည်းအား ဒေါ်လာ ၃၄၃ဖြင့် ရောင်းချနိုင်ခဲ့<br>=======================================<p>ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ …
Valentine Day နေ့မတိုင်မီစုံတွဲခွေထွက်မယ့် ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း... More Photos >> www.myanmarcutegirl.com <<
အကယ်ဒမီ ယွန်းယွန်း ''ဒီနှစ်မွေးနေ့ကတော့ ယွန်းယွန်းအတွက် တကယ်ကိုပဲ အမှတ်တရဖြစ်စေတဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ပါ'' ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၂ အကယ်ဒမီ ယွန်းယွန်း၏ အသက်(၁၄)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူအား မြန်မာနိုင်ငံရုပ် ရှင် အစည်းအရုံးတွင် ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်၌ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင် စက်မှုလက်မှု အနုပညာရှင်များအား အလှူဒါန ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမွေးနေ့အလှူနှင့် ပတ်သက်ပြီး သရုပ်ဆောင်ယွန်း ယွန်းက ယခုလိုပဲ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ''ယွန်းယွန်းရဲ့အသက်(၁၄)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ အနုပညာလမ်း လို့ အနုပညာရှင်တွေ ခိုင်းနှိုင်းခေါ် ဝေါ်ကြတဲ့ ၃၅လမ်း တစ်လမ်းလုံးကို စတုဒိသာအလှူလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ယွန်းယွန်းအတွက်ပိုပြီးတော့ ကျေနပ်ပီတိ ဖြစ်ရတာကတော့ ယွန်းယွန်း နဲ့ မွေးနေ့တူ အနုပညာရှင်အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေနဲ့ အတူတူ ဒီနှစ်မွေးနေ့ ကို ယွန်းယွန်းအလှူလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အတွက်ပါ။ ယွန်းယွန်းနဲ့မွေးနေ့တူ အနုပညာရှင်အစ်ကို ထွန်းကိုကိုနဲ့ အစ်မ ပိုးအိအိခန့်တို့နဲ့ အတူတူ ရုပ် ရှင်အစည်းအရုံးမှာလဲ အလှူလုပ် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ရုပ်ရှင်လောကမှာ ကျင် လည်နေကြတဲ့ ရုပ်ရှင်စက်မှုလက်မှု အနုပညာရှင်တွေကို ယွန်းယွန်းတို့ သုံးယောက်ပေါင်းပြီးတော့ အဝတ်အ စားတွေ၊ အစားအသောက်တွေကို လှူဒါန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်မွေးနေ့ ကတော့ ယွန်းယွန်းအတွက်တကယ် ကိုပဲ အမှတ်တရဖြစ်စေတဲ့နှစ်တစ် နှစ်ပါ။ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး တော့ ဘာတွေလုပ် ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ အခုလောလောဆယ်တော့ ကျောင်း တစ်ဖက်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် အနုပညာ အလုပ်တွေ ဆိုရင်လဲ အရမ်းကြီး အချိန်မပေးရတဲ့အလုပ်တွေ ကြော် ငြာတို့၊ ဓာတ်ပုံတို့ လောက်ပဲရိုက်ဖြစ် ပါတယ်။ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေဆို ရင်လဲ အရမ်းကြီးအချိန်မပေးရတဲ့ ဇာတ်ကားတွေဆိုရင်တော့ မေမေ ခွင့်ပြုရင်တော့ ယွန်းယွန်းရိုက်ဖြစ် ပါတယ်။ ကျောင်းပြီးသွားတော့မှပဲ ယွန်းယွန်းအနုပညာအလုပ်တွေကို ဇောက်ချပြီးတော့ လုပ်ဖြစ်တော့မှာ ပါ''။ NN ဒီမိုကရေစီတူဒေး
น้องมิวววว เป็นสาวแว้ววว #thaitvsocial
ပုံမတင်တာကြာလို့မေ့နေကြပီလား စိုးပြည့်ပရိတ်သတ်တွေအားလုံး ကိုသတိရလျက်ပါ... #Admin
နေ့သစ်လေးတစ်နေ့ စတင်ခဲ့ပြီ... အေးချမ်းပါစေ ☺️🙏
15/1/2015 byn matpe faq 882 seller/ 878 buyer, lemon tur 800 seller/ 795-796 buyer
မေသက်ခိုင် " ဂျစ်တူး "
San Yati Moe Myint - Pink is Hot
Admin A+ A-<p>http://www.papawady.com/2013/12/san-yati-moe-myint-pink-is-hot.html<p>Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the …
Poe Dar Li & Mya Hnin Ye Lwin
Admin A+ A-<p>http://www.papawady.com/2012/08/poe-dar-li-mya-hnin-ye-lwin.html<p>Models - Mhylwin and Poe Darli<br>Makeup- Hello (Ma Cho & Ma Khing)<br>Dress- Kool …
Khin Thazin - Cover Album Girl
M Seng Lu - Bounded by HAK
သရဖူအသိမ်းခံရတဲ့ဂျူးစံသာဘက်ကမိတ်ဆွေတဦးရဲ့ချေပချက် ----------------------------------------------------------------------- ကြာသပတေးနေ့မှာ အဲဒီလို ကြေညာလိုက်တာကို ဂျူးစံသာက ချက်ချင်း တုံ့ပြန်ခြင်း မရှိသေးပါ။ အခု ဖော်ပြမှာကတော့ ဂျူးစံသာရဲ့မိတ်ဆွေတဦးရဲ့ ရေးသားချက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ဂျူးစံသာရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ရေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာနိုင်ဖို့ ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဂျူးစံသာcrownအသိမ်းခံလိုက်ရပါတယ်.. .့ မွေးသဖခင်ကျေးဇူးရှင်နာမကျန်းဖြစ်နေသောကြောင့် ဂျူးမမ နဲ့မေမေကဆေးခန်း လိုက်ပို့ပေးနေပါတယ်.. အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးတယောက်ဟာ စာချုပ်ချုပ်ဆိုတာ တယောက်တည်း သွားလို့ရတဲ့ကိစ္စ္စ မဟုတ်ပါဘူး အုပ်ထိန်းသူမပါပဲနဲ့လဲ လုပ်ခွင့်မရှိပါဘူး.. . နောက်ပီး စာချုပ်လက်ထဲရောက်တာ၂၄နာရီတောင်မပြည့်သေးပါဘူး crown သိမ်းမယ်ဆိုပီးအကြောင်းကြားလာပါတယ်.. .. နောက်ပီး Miss golden Land Myanmar မှာ ကူညီပေးဖို့ကိုလည်း ဆရာမလှနုထွန်းဆီမှ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံပီး ခွင့်ပြုလို့ ကူညီပေးနေတာပါ.။ မိဘပြည်သူတွေသိတဲ့အတိုင်းပါပဲဂျူးစံသာဟာဆိုရင် ယဉ်ကျေးလိမ်မာတဲ့ ကလေးတယောက်ပါ.. နောက်ပီး သူမရဲ့အသက်ဟာဆိုရင် ၁၇သာသာပဲရှိပါသေးတယ် အသေးစိတ်ဖတ်ရန်>>http://www.searchmyanmar.com/link/frame/cid/39516 ----------------------------------------------------------------------------------------- အခြားသတင်းထူးများ>> https://www.facebook.com/myanmarupdates အနုပညာရှင်အကြောင်းများ>>http://www.searchmyanmar.com/click/search/category/celebrities?lang=mm
Golden Princess Mingalardon
This Facebook post is no longer available. It may have been removed or the privacy settings of the post may have changed.<p>Golden Princess Mingalardon. …
ံရွှေလမင်း မြန်မာ့ချည်ထည် online shopping
I was really tired last night But I couldn't sleep..........💤 So I decide no more coffee ☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕
ဘီကီနီကားရေဆေးလုပ်ငန်း လာရောက်လျှောက်ထားသူ များပြားနေ မိန်းကလေးတွေဟာ ဘီကီနီကားရေဆေးအလုပ်ကိုရဖို့ တန်းစီလျက်ရှိပါတယ်။ ယောက်ျားတွေကလည်း ဒီမိန်းကလေးတွေလုပ်တဲ့ဆိုင်မှာ သူတို့ကားတွေကို ရေဆေးဖို့ တန်းစီလျက်ရှိပါတယ်။ ထိုင်ဝမ်က ပြိုင်ကားမောင်းသမား Fang Zhao-ze ဟာ ကားရေဆေးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဖွင့်ထားပြီး ဒီဆိုင်မှာ အမိုက်စား မိန်းကလေးတွေက မလုံ့တလုံလေးတွေဝတ်ပြီး ကားတွေကို ရေဆေးပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Zhao-ze ရဲ့အပြောအရ ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ လာရောက်လျှောက်ထားသူတွေရဲ့ လျှောက်လွာပေါင်း ၂၀ လောက်ကို နေ့စဉ်လက်ခံနေရပါတယ်။ သူကတော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပုံစံနဲ့ ရင်သားအရွယ်အစားကို အဓိကထားကြည့်ရှု ရွေးချယ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး အရပ် ၅ပေ ၄ လက်မနဲ့ ဘရာစီယာဆိုက်ဒ် D ဆိုက်ဒ်လောက်ရှိရပါမယ်။ တစ်ပတ် ၆ ရက်နဲ့ တစ်နေ့ ၆ နာရီလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လုပ်ခလစာကတော့ သာမန် ကားရေဆေးဆိုင်တွေနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ပုံမှန်ကားရေဆေးဆိုင်တွေက တစ်လ ဒေါ်လာ ၈၆၀ လောက်ပဲ ပေးပေမဲ့ Zhao-ze ကတော့ ၁၉၈၈ ဒေါ်လာ ပေးတယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ရေတွေထဲမှာ ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်နီးပါး ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ခြောက်နာရီလောက်နေရမယ့် ဒီအလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ မိန်းကလေးတွေမရှားပါဘူးတဲ့။ ဖိုးသူတော်
တက္ကဆီ မောင်းသူကို လိင်ဆက်ဆံခိုင်းပြီး အလိုမပြည့်လို့ ဓါးနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး<p>အိန်ဂျလီနာ ဂျိုလီနဲ့ ရုပ်ချင်းဆင်တူပြီး အသက် ၃၁နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ …